आजको कार्टून Archives - Sawal Nepal
भक्कावाली- Quick Sketch
कुरो यस्तो पो !
भाग्य भरोसा मौसपुर्वअनुमान, हेर्नुहोस साच्चि खतलाग्यो कार्टुन
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त अमेरिका जाँदै, यस्तो छ कारण
काठमाण्डु, १ चैत – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राज्य अमेरिका जाने भएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड मार्च १८ तारिखमा अमेरिका जान लागेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिका जान लागेका हुन् । दाहालसँगै परिवारका अन्य केही सदस्य पनि अमेरिका जाने बताइएको छ । यसअघि प्रचण्ड
लौ हेर्नुहोस् त यस्तो पो भएछ डा. केसीको बिषयमा दलहरुको धारणा !
लौ हेर्नुहोस् त यस्तो पो भएछ डा. केसीको बिषयमा दलहरुको धारणा ! कार्टुन
खोइ कता हाल्ने मत ? कुरो कडा आयो
मध्य असारमा निर्वाचन । किसानलाइ धान रोप्नको चटारोको समयमा । यसले पक्कै पनि समस्या त खडा भएको छ नै त्यो संगै पिर पनि थपिएको छ । अरु समय पानी नपरेर १४ गते नै पानी पर्यो भने किसानहरुले के गर्लान् यो चिन्ता त उम्मेद्वारलाइ त छदैछ किसानलाइ पनि मत हाल्न जाने पाइने हो की होइन संगसंगै
भोट के मा ? खल्तिमा !
मध्य बर्षामा निर्वाचन हुने भएको छ । यसले किसानहरुलाइ भोट हाल्न जानु की धान रोपाइ गर्नु समस्या त छदैछ । अर्को तर्फ पानी पर्यो भने कसरी मतदान स्थल पुग्ने होला भन्ने चिन्ता पनि छ । जसले छाता वा घूम दिन्छ उसैलाइ भोट भन्ने किसानहरु पनि भेटिएकाछन् । यसै सम्बन्धिको कार्टुन
बर्षाले चुनाव सर्ने सम्भावाना !
आजको कार्टुन देवत्करण पदक बितरण
जन्ती चढेको गाडी दुर्घटना